Fanapariahana ny kolontsaina :: Mankalaza ny faha-15 taonany ny « Angaredona » • AoRaha
Fanapariahana ny kolontsaina Mankalaza ny faha-15 taonany ny « Angaredona »
Lanonana goavana mampiray ireo mozika miaina rehetra manerana an’i Madagasikara ny « Angaredona ». Feno 15 taona ity fety ity ka any Antsirabe no nosafidiany mpikarakara handraisana izany, ny 3 hatramin’ny 6
oktobra 2019 ho avy izao.
Hifarimbona ao anatin’ny efatra andro ireo mpanakanto andrarezina rehetra any an-toerana hotronin’ireo mpana­kanto avy any amin’ny faritra maro manerana ny Nosy. Hiavaka kely ny fanka­lazana satria hijery ny « Kolon­tsaina » araka ny maha « Fikoloana ny saina » azy, ireo mpikarakara. Mpana­kanto miisa sivy amby sivifolo ihany koa no hahazo ny fan­kasitrahana « Ordre des arts et des lettres ».
“Hanamafy ny fandraisana anjara amin’ny fibeazana ny fiarahamonina ny mpana­kanto tsirairay ka samy hivoy lohahevitra tsirairay avy. Voa­kasika ny tontolo iainana, ny zon’olombelona, ny fanentana samihafa. Handray ny lafiny maha olona rehetra ny « Angaredona ». Ny saina, ny vatana ary indrindra ny fanahy satria ny « fanahy no olona »”, hoy Rajery, angady nananana sy vy nahitana ity fety goavana ity. Miara-misalahy ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ny serasera, ny Ofisim-paritry ny fizahantany any Vakinakaratra, ny ivon-toe­rana nasionaly fampianarana mozika (CNEMD), ny Alli­ance Française Antsirabe ary ny Cercle Germano-Malagasy (CGM/GZ) amin’ny fanatanterahana ny hetsika manontolo. Tsy ho mozika ranofotsiny no hita mandritra ny lanonana.
Hisy ny fanomezana lanja an’ireo kilalao nentin-drazana ao anatin’ny « Kilonga milalao», toy ny kabary, fano­rona, Katro, Vitsily, kinarina­rina, fifaninanana manosika kodiarana sy ny kalesy. Haseho amin’ny alalan’ny « Bira
Carnaval » ny taovolo sy fitafy manerana ny Nosy. Homena vahana manokana ireo mpa­nakanto vao misandratra any amin’ny faritra Vakinakaratra.
Raharaha fahafatesana mpitsabo Navotsotra sady tsy natolotra ny Fitsarana ilay profesora
Fikasana fikomiana :: Tsy mampihetsi-bolomaso an’ireo lehiben’ny polisy ny resaka miely